Mafanafana ny varotra data-driven! | Martech Zone
Sabotsy 9 Novambra 2013 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Fikarohana mahaliana vitsivitsy avy amin'ny BlueKai's fianarana momba ny paikady ara-barotra tarihan'ny data. Noheveriko fa mahavariana indrindra ny fihetsiky ny zava-dehibe raha ny amin'ny fotoana mety indrindra amin'ny fantsona-cross / cross-platform. Na dia mbola mitana ny fanalahidin'ny fikarohana aza ny milina fikarohana, dia nilatsaka be izany. Mino aho fa izany dia noho ny fanafenan'i Google ny teny lakile sy ny fanamafisana ny algorithman'izy ireo namono ny Indostrian'ny SEO. Niverina nijery ny sary lehibe momba ny tena misy akony amin'ny fidiram-bola ireo mpivarotra fa tsy manenjika teny lakile sy laharana.
Faly koa aho nahita ny mailaka nitsambikina tao amin'ny top 5 sy ny fihenan'ny fiaraha-monina. Indostria 20 taona ny marketing amin'ny mailaka - taloha amin'ny Internet fa tsy mahafatifaty loatra. Fa ny sehatra Marketing Automation (toy ny mpanohana anay Miorina amin'ny Interactive) dia mamerina miverina amin'ny laoniny miaraka amin'ny ezaky ny varotra tarihin'ny data voatsara. Mbola paikady azo iainana ny sosialy, saingy fantatry ny orinasa fa ilaina ny marketing amin'ny mailaka rehefa tonga ny fanosehana ny marketing sy ny fitazonana azy!
Mahafinaritra ny mahita horonan-tsary omena saina ihany koa! Nihena ny vidiny ary nitombo ny fanantenana amin'ny horonan-tsary. Izahay dia manosika ny mpanjifanay rehetra hamolavola tranomboky horonan-tsary (manana pejy horonantsary Marketing izahay izao!) Ary mametraka azy ireo eo afovoany sy eo afovoany amin'ny pejy tsirairay amin'ny tranokalan'izy ireo. Zahao ny Karazana horonan-tsary manazava 10 avy amin'ny mpanao dokam-barotra Yum Yum Videos misy hevitra vitsivitsy!
Tags: automatiquebluekaiDatamarketing data-drivenmarketing amin'ny tahirymailakaSary torohayhoronantsary marketingLahatsary MarketingSearch Marketinghaino aman-jery sosialySocial Media Marketing